Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » St. Regis San Francisco wuxuu Magacaabay Maareeyaha Guud ee Cusub
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
St. Regis San Francisco ayaa ku dhawaaqday in Roger Huldi loo magacaabay Maareeyaha Guud ee cusub
St. Regis San Francisco, cinwaanka ugu sarreeya magaalada ee hoyga raaxada, adeegga naxariista leh iyo xarrago la'aanta, waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo magacaabista Roger Huldi ee jagada maareeyaha guud. Hoggaamiyaha hawlgallada martigelinta oo aad u wanaagsan oo caan ku ah horumarinta barnaamijyada hal -abuurka leh iyo horumarada leh, Huldi waa ruug -caddaa warshadeed oo khibrad u leh ku dhawaad ​​30 sano oo waayo -aragnimo ah oo la shaqaynaya Marriott International iyo Starwood Hotels and Resorts.
St. Regis San Francisco ayaa ku dhawaaqday in Roger Huldi loo magacaabay Maareeyaha Guud ee cusub.
Huldi waa hoggaamiye hawlgallo soo dhaweyn heer sare ah oo caan ku ah horumarinta barnaamijyada iyo dadaallada hal -abuurka leh.
Huldi waa ruug -caddaa warshadeed oo leh khibrad ku dhawaad ​​30 sano ah oo la shaqaynaya Marriott International iyo Starwood Hotels and Resorts.
Huldi ayaa ku biira St. Regis San Francisco ka dib siddeed sano oo uu ahaa maamulaha guud ee W San Francisco, halkaas oo uu u horseeday hantida Shahaadada LEED Platinum wuxuuna soo bandhigay barnaamijyo firfircoon oo hadda la waafajiyay caalamka. Si loo aqoonsado hoggaanka Huldi, American Hotel and Lodging Association waxay W San Francisco u magacowday Hoteelka Sanadka 2016.
"Sharaf bay ii tahay inaan ku biiro doorka maareeyaha guud ee St. Regis San Francisco, oo caan ku ah adduunka oo dhan xarrago iyo naxariis leh," ayuu yiri Huldi. "Waxaa sharaf weyn ii ah inaan ku biiro kooxda ku dayashada leh ee St. Regis San Francisco inta aan la kulmeyno dookhyada jiilalka cusub ee socotada iyadoo la ilaalinayo heerarka saxda ah ee astaanta caanka ah ee St. Regis."
Cunto-kariye si xirfadeysan u tababaran, Jidka Huldi ee warshadaha soo-dhoweynta wuxuu ahaa doorka hoggaamineed ee cunnada shanta xiddigood, guryaha raaxada ah, markii ugu horreysay ee waddankiisa Switzerland ka dibna Australia, halkaas oo uu ka qaatay shahaadada Maamulka Ganacsiga ee Jaamacadda Bond.
Huldi waa rookaha buuraha iyo barafka jecel, wuxuu ku raaxeystaa inuu ku safro San Francisco Bay, wuxuuna si gaar ah u jecel yahay socod dheer oo ay la gasho xaaskiisa waddooyinka badan ee socodka Baay. Isagu sidoo kale waa aficionado shinni, kaas oo si fiican ula jaanqaada barnaamijka shinnida hudheelka iyo guud ahaan u heellanaanta dhaqannada waara.
Huldi waa xubin firfircoon oo ka tirsan guddiga Ururka Safarka San Francisco, California Hotel and Lodging Association's Aasaaska Martigelinta, iyo Golaha Hoteelka San Francisco.
St. Regis San Francisco waxay bixisaa 260 qol iyo suuliyo, kuwaas oo dhammaantood dhowaan dib u sawirtay shirkad caan ah oo fadhigeedu yahay Toronto oo la yiraahdo Chapi Chapo. Dib -u -qaabaynta ayaa sidoo kale koobtay St. Regis San Francisco 15,000 cagood oo laba jibbaaran oo kulan iyo goobo munaasabado ah, abuurista aagag la safeeyey, raaxo leh oo hal -abuur leh oo loogu talagalay inay fududeeyaan wada -hadalka iyo wada -shaqaynta. St. Regis San Francisco, sida dhammaan guryaha St. Regis, waxay caan ku tahay saxiixa Butler Service.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan St. Regis San Francisco iyo bixinta badan, fadlan booqo halkan.
St. Regis San Francisco la furay bishii Nofembar 2005, oo lagu soo bandhigay cabbir cusub oo raaxo leh, adeeg aan kala go 'lahayn, iyo xarrago aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay magaalada San Francisco. Dhismaha taariikhiga ah ee 40-dabaq ah, oo ay naqshadeysay Skidmore, Owings & Merrill, waxaa ku jira 102 guri oo gaar loo leeyahay oo sare u kacaya 19 heer oo ka sarreeya 260-qol ee St. Regis Hotel. Laga soo bilaabo adeegga hiliblaha halyeeyga ah, “sugitaanka” daryeelka martida iyo tababarka shaqaalaha ee aan fiicnayn ilaa waxyaalaha raaxada leh iyo naqshadda gudaha ee Chapi Chapo ee Toronto, St. Regis San Francisco wuxuu bixiyaa khibrad martida oo aan u dhigmin. St. Regis San Francisco waxay ku taallaa 125 Third Street. Taleefanka: 415.284.4000.